3 musharax ee wareegyada dambe ee doorashada K/G isugu soo hari doonta - Caasimada Online
Home Warar 3 musharax ee wareegyada dambe ee doorashada K/G isugu soo hari doonta
3 musharax ee wareegyada dambe ee doorashada K/G isugu soo hari doonta
Baydhabo (Caasimada Online) – Lix Musharax ayaa isugu Soo haray doorashada Koofur Galbeed, kadib markii shalay Musharixiintii ugu badnaa ay ka tanaasuleen doorashada madaxweynaha iyaga oo wakiishay Mukhtaar Roobow Mansuur.
Lixda Musharax ee isku soo haray ayaa Seddex kamid ah la saadaalinayaa inay isugu soo hari karaan wareegyada ugu dambeeya ee doorashada, waxaana la hadal hayaa in xubno taageero ka helayo dowladda ay ka mid yihiin dadka ugu cad cad.
Lixda Musharax ee isku soo haray ayaa kala ah:-
1- CabdiCasiis Lafta gareen 2- Mukhtaar Rooboow 3- Ibraahim Macalin Nuur 4- Xuseen Cismaan Xuseen 5- Amb Sayid Axmed 6- Aadan Saran Soor
Seddexda Musharax ee isku soo hari kara ayaa kala ah Cabdi Casiis Lafta Gareen, Mukhtaar Roobow iyo Xuseen Cismaan Xuseen, waxaana la dhayalsan karin Aadan Saran soor oo isna taageero heysta.
Lafta Gareen ayaa ah ruuxa sida weyn loo hadal hayo inuu taageero buuxdo ka helayo dowladda Soomaaliya, laakiin markaan waxaa fursad kale helay Mukhtaar Roobow oo musharixiin uu kamid yahay wasiirkii maaliyadda uu u tanaasulay.
Haddii Aadan Saransoor iyo Mukhtaar Roobow ay usoo gudbaan wareega ugu dambeeya ee doorashada waxaa la saadaalinayaa inay iskuugu shubi karaan wareega ugu dambeeya iyaga oo ka horjeeda in musharaxa dowladda Dooneyso uu guuleysto.
Labo maalin kadib doorasho adag ayaa ka dhaceysa magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, waxaana ku loolamaya musharaxa dowladda Soomaaliya ay dooneyso iyo Musharax mucaaradka ay wataan.